Umuthi 'Anaferon "ingenye indlela ephumelelayo kakhulu nokwelashwa kwezifo ezibangelwa amagciwane ezinganeni nakubantu abadala.
Anaferon kungenziwa kwiqembu kwemithi kwezidakamizwa ngokuthi immunomodulators kanye nethonya elinamandla ngokumelene amagciwane athile. Okungukuthi, kuba umuthi oyenza omzimba omuntu ukulwa igciwane. Isenzo nemithi "Anaferon" ukuba buthaka amasosha omzimba womuntu kwenzeka emangqamuzaneni.
Ngaphambi kokuthi uqale kokuthola izidakamizwa "Anaferon" (umuntu omdala), imiyalelo for ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezihlongozwayo kufanele wafunda kahle ukugwema nemiphumela emibi. Umuthi is edayiswa Pharmacy ngaphandle kadokotela, kodwa ukusetshenziswa kwalo kumelwe kube kuncike nezidingo isichasiselo unamathisele kanye nezincomo likadokotela, kufanele siqaphele ukuba singavumeli yokweqisa.
Ukulungiselela "Anaferon" (umuntu omdala), okuyinto libuyekeza omuhle kakhulu, kukhiqizwa ngendlela amaphilisi suckable ngaphansi kolimi. Bona ukuma flat cylindrical futhi asemhlophe ukuba ukhilimu noma umbala lemicu empunga elinamathela othini. Omunye ithebhulethi ekulungisweni "Anaferon» kabani Ukwakheka e isichasiselo njalo amarejista abenokuqukethwe etholwe ubuchwepheshe homeopathic ingcosana amasosha omzimba Affinity sebehlanjululwe esintu gamma interferon. excipients zayo abamelwe kukhona magnesium stearate, i-lactose, microcrystalline cellulose. Ngo iphakheji amakhadibhodi kuyinto ibhamuza amaphilisi 20-Tew.
Umthelela ayisivikelo izidakamizwa yiso ngokwandisa inani la masosha omzimba, kanye kumiswa interferon. Ngenxa yalokho, ngo-umkhuhlane isifo noma SARS ezahlukene abantu alizibonanga a yisisu ekhaleni, ukukhwehlela, imfiva, ikhanda. Lokhu kusho ukuthi lesi sifo kulula, akunakwenzeka ukuthi isifo esibangelwe igciwane.
Medicine "Anaferon" (umuntu omdala), imfundo manual lobeka imininingwane ebalulekile mayelana nezici umthamo zomuthi has izinkomba ezithile ukuze bayothola ukwelashwa. Ngakho, isetshenziswa
- for ekwelapheni ezingamahlalakhona kanye acute herpes izifo, SARS, umkhuhlane,
- cytomegalovirus ukutheleleka,
- yezifo engenhla ipheshana zokuphefumula (tracheobronchitis, laryngitis, rhinitis, pharyngitis).
Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa isetshenziselwa yokwelapha eyinkimbinkimbi izifo ezifana webhaktheriya, noma exubile, futhi ukuze kwelashwe SARS kanye nezinkinga Umkhuhlane, ukuze avimbele izifo futhi immunodeficiency uthi.
I nomuthi "Anaferon" (umuntu omdala), yokusetshenziswa esidingeka ukwazisa eyamukelayo Kunconywa imithamo, inikezwa ithebhulethi owodwa kusukela ezikhathini 3 kuya ku-6 ngesikhathi ngosuku lokuqala, kuye ngezinga of isifo. Njengomthetho, uphuzwe imizuzu 20-30 ngaphambi nangemva niyadla noma niyaphuza. Lapho isimo lesiguli ngcono kakhulu, umthamo kuyehla kube kanye ngosuku. Uma ngosuku lwesithathu akukho ngcono, kufanele ufune usizo lukadokotela.
Ukuze uvimbele izidakamizwa "Anaferon" kuthathwe esiswini esingenalutho nsuku zonke, usuku olulodwa ithebhulethi yonke ubhubhane sikhathi, okusho elilodwa kuya ezinyangeni ezintathu.
Ngo exacerbations okukhulu zangasese herpes imithi esithathwayo ngokuvumelana uhlelo elandelayo ezihlongozwayo:
- izinsuku ezintathu zokuqala - njalo ngezikhathi ezithile njalo ngemuva kwamahora amathathu,
- izinsuku 4-5 - izikhathi 7 ngosuku,
- 6 -7 usuku - usuku izikhathi 6,
- 8 - Day 9 - 5 izikhathi ngosuku,
- izinsuku 10-11 - kane ngosuku,
- phansi ezinsukwini yokwelashwa 21 - kathathu ngosuku.
Ukuze lokuvikela eminye - iphilisi elilodwa njalo ngemva kosuku. Kunconywe Yiqiniso zokuvimbela - ezinyangeni eziyisithupha.
Emva kokuthatha umuthi, "Anaferon" (Adult) (yokusetshenziswa ubhekisela kulo), imiphumela emibi kungukuthi waphawula, ngaphandle khona abanye abantu azizwani iguliswa ilungu layo nezinsizasenzo.
Umuthi anezinye Izimo ukusetshenziswa. Ngakho-ke, engathandeki ukuyisebenzisa phakathi nokukhulelwa kanye lactation noma izifo sokuhlasela kwamasosha omzimba, nakuba umuthi kulesi sici azikho imiphumela yomtholampilo okuthembekile.
Umdwebo "I-Church of the intercession phezu Nerl" Gerasimov: Umlando kanye nencazelo
Ummbila usilika: izakhiwo ewusizo kanye contraindications